FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA OLDE VICTORIAN BULLDOGGE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Olde Victorian Bulldogge
Sary natolotr'i Carlos Woods
Ohld Vic-to-ri-an Bool-dawg
Ny Olde Victorian Bulldogge dia alika antonony antonony sy midadasika ary mifono milamina. Lehibe izy io ary misy taolana matevina izay tsy manakana ny hery. Izy io dia manana vava malalaka miaraka amin'ny tarehy fohy, nefa tsy fohy loatra hanakanana ny fahaizan'ny miaina. Ny indoneziana dia tokony ho somary avo kokoa noho ireo mialoha. Ny Bulldogge dia tokony hanana vatana symmetrika ary hozatra tsara. Ny loha dia tokony ho lehibe nefa tsy mifanaraka amin'ny vatana. Ny takolaka dia tokony faritana tsara sy boribory. Manomboka amin'ny fijanonana ka hatramin'ny faran'ny monja dia tokony refesina 1,5 santimetatra. Ny molotra dia tokony ho miharihary hitodika mankany ambony, voafaritra tsara amin'ny ketrona tsara ny ketrona dia tsy tokony ho malalaka loatra amin'ny famorony tafahoatra ny orona ny manaikitra dia tokony ho ambany tsy misy tafahoatra sy toradroa. Ny nostrils dia tokony ho mainty lehibe sy malalaka. Ny nify (canine) dia tokony hapetraka malalaka sy lehibe. Ny maso avy eo aloha dia hapetraka ambany sy malalaka. Ny maso dia tsy tokony ho be volo na ho rendrika. Mitsangana ny sofina na ny sofina bokotra tsy tokony hitsangana na hotapahina. Ny ampahany voafaritra indrindra amin'ny karazany dia ny tokony hahabe reflekana azy araka izay azo atao (ny fihodinana dia tokony hitovy amin'ny hahavony, ny omby ambony kokoa dia hanana boribory lehibe kokoa noho ny hahavony). Ny fihodinan'ny lohan'ny vehivavy dia tsy ho lehibe toa ny lahy. Ny takolaka dia tokony ho faritana tsara, mampiseho ny famaritana herinaratra ny takolaka horaisina amin'ny taonan'ny Bulldogge (ity fampiasa ity dia mahazo famaritana bebe kokoa amin'ny taona) 2 ka hatramin'ny 3 taona fahamatorana farany. Ny fifantohana be loatra dia tsy tokony hapetraka amin'ity endri-javatra ity ao amin'ny Bulldogge tanora. Ny valanorano dia tokony ho toy izao: ny valanoranon'ny valanorano ambany kokoa noho ny valanorano ambony izay hanome ny valanoranony hiakatra ambony. Tokony ho toradroa ny kaikitra. Tusk (Nify): Ny kanelina dia tokony hitokana misaraka ary misy nify kely kokoa apetraka eo anelanelan'ny canine. Ny molotra dia tokony ho malalaka sy mavesatra (tsy milamina), mihantona eo ambany valanoranony, dia tokony ho feno bika. Ny orona dia tsy maintsy milamina tsara, lehibe, malalaka ary mando mainty tonga lafatra miloko ampahany na Dudley orona dia tsy tiana fa tsy disqualification. Ny maso dia apetraka lavitra araka izay azo atao ny maso dia tokony ho lehibe nefa tsy mibontsina ny maso tokony hapetraka tsara (mitovy amin'ny lafiny roa) avy eo afovoan'ny karandohany. Ny sofina dia tokony ho miendrika raozy (fohy, kely ary aforeto kokoa hatrany amin'ny ilany) na bokotra (semi-pricked amin'ny avotra mandroso). Ny fijanonana dia ny fihorirana eo amin'ny maso. Ny fijanonana dia tokony ho lalina sy malalaka, tokony hitatra amin'ny karan-doha ity endri-javatra ity manome endrika toradroa ny karandohany. Ny halalin'ny fijanonana dia manome famaritana bebe kokoa momba ny fomba fametrahana ny maso sy ny sofina. Matevina, matanjaka ary arched, miaraka amin'ny hoditra malemy mamorona dewlap amin'ny lafiny roa, ny tendany dia tokony ho fohy, tsy manana bika lava akory. Ny bulldogges dia tokony hanana ilay antsoina hoe vozon'omby (matevina, hozatra ary fohy), fa tsy hatendan-tady (hozatra lava na lava kely), izay tsy mampiseho hery na endrika. Ny soroka dia tokony ho malalaka sy lalina. Ny tratra dia tokony hipoitra tsara sy lalina. Ny fiakarana any aoriana dia tadiavina raha mbola tsy tafahoatra izy io, ka mahatonga ny simetran'ny alika hijaly. Ny forelegs dia tokony hozatra, mahitsy ary mivelatra ny tsipìka kely dia tsy fahadisoana raha tsy hoe mihoa-pefy izy amin'ny fihodinanan'ny kiho. Ny Bulldogge dia tokony ho eo amin'ny pastern-ny ary ny pastern dia tokony ho mafy. Ny tongotra Hind dia tokony hozatra maneho hery, manisy kitondro somary miondrika, tongotra boribory ary matevina. Ny satroka dia malalaka sy lalina araka izay azo atao miaraka amin'ny tadin'ny tadiny. Tokony ho boribory ny taolan-tehezana. Ny valahana dia tokony ho mahery amin'ny tuck-up izay tsy manaisotra ny endrika cobby. Na mahitsy, mihodina, na visy. Ny rambony dia tsy tokony hoentina ambonin'ny lamosina. Tsy misy fihenam-bidy ho an'ny rambony voahidy, satria tsy misy ifandraisany amin'ny kalitaon'ny alika. Ny tongotra Hind dia tokony ho avo kokoa noho ny tongotra eo anoloana tsy misy mihoampampana, tokony hipoitra amin'ny stifle (lohalika) tsy misy fihoaram-pefy izy ireo ka mahatonga ny hock hitodika any anatiny somary lava kokoa ny tongotra noho ny tongotra eo aloha ary matevina. Ny forelegs dia fohy kokoa noho ny tongony aoriana dia tokony ho matanjaka ary mety mahitsy na miondrika (tsy misy mihoatra). Ny forelegs dia tokony havadika kely eo amin'ny soroka mba hahafahan'ny vatana mikorisa. Tokony mahitsy amin'ny pastern, tongotra dia tokony ho lehibe, boribory antonony. Tokony hizara roa ny rantsan-tongotra raha tsy araraka. Tsy misy fanesorana ny rantsan-tongotra. Ny loko dia misy: brindle / fotsy, brindle hafa rehetra (ao anatin'izany ny mainty / brindle), fotsy matevina na pied, fawn na tanna. Solid Black dia loko tsy faniry. Ny Blue dia tsy loko natioran'ny Bulldogge, fa azo ekena. Rehefa mitsara ny loko dia tsy tokony hanan-danja amin'ny kalitaon'ny alika dia tsy tokony hodinihina ny lokon'ny bulldogge raha tsy amin'ny tranga mitovy fahamendrehana. Ny undesirables dia handray ny faharoa. Fohy sy fohy ny palitao dia malama sy marefo tokoa raha mikasika azy.
Ny Olde Victorian Bulldogge dia alika tsy mivadika, mahonon-tena, miorina tsara. Mifanaraka tsara amin'ny biby fiompy ao an-trano izy rehefa lehibe miaraka amin'izy ireo ary tiany ny ankizy. Sahy sy miaro izy. Mamonjy ny hazondamosiny lalina amin'ny raharaha tena lehibe izy. Lehibe sy matanjaka izy. Raha tsapany fa tsy toy ny tompony mahery saina amin'ny tenany dia mety ho lasa maditra izy ka fitarihana matanjaka notoroana hevitra. Amin'ny maha alika alika azy ireo dia hanao izany mitsako daholo afaka mahita izy ireo. Ny Bulldogge dia tokony ho maharitra, tsy mivadika ary marina miaraka amina toetra azo ianteherana. Tokony ho sahy tsy misy herisetra izy. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria a mifampiresaka ny alika ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Io ihany no làlanao fifandraisana amin'ny alikanao mety ho fahombiazana tanteraka.
Lehilahy: hahavony 18 - 19.5 santimetatra (46 - 50 cm)
Lehilahy: lanja 65 - 100 pounds (29 - 45 kg)
Vehivavy: hahavony 17,5 - 19 santimetatra (44 - 48 cm)
Vehivavy lanja 55 - 85 pounds (25 - 38 kg)
Fampandrosoana miadana ny tonon-taolana (tolo-kevitra iraisana ampiana). Entropian dia tsy fahita firy fa noho ny ketrona dia mety hitranga. Ny maso serizy dia tsy fahita firy fa mety hitranga ihany koa.
Ny Olde Victorian Bulldogge dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Ireo alika ireo dia tsy mihetsika ao anaty trano ary tokony hanana tokotany kely farafaharatsiny. Tena tantanin'izy ireo tsara ny hafanana sy ny toetr'andro mangatsiaka, saingy rehefa mafana be ny mari-pana dia alao ny alokaloka sy rano madio.
Ny Olde Victorian Bulldog dia afaka mandeha an-kilaometatra maro, ary tokony horaisina a mandeha isan'andro . Raha ny marina dia mitaky fanatanjahan-tena tsara izy ireo ary maniry hazakazaka tsara.
Ny palitao malama, tsara ary volo fohy dia mora taolana. Borosio ary borosy amin'ny borosy mafy volo, ary mandro raha tsy ilaina. Sasao amin'ny lamba mando ny tarehy isan'andro, mba hadio ao anaty kentrona. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
laboratoara inona no misy
Noho ny fianjeran'ny bulldog maoderina dia natomboka ny famoronana Bulldogge tsara kokoa. Ny OVB dia novolavolain'i Carlos Woods ary ny fampandrosoana ny OVB dia nanomboka tamin'ny 1988. Ny OVB dia nidina avy amin'ny English Bulldog, American Bulldog, German Boxer, Staffy Bull ary Olde Bulldogge.
VBA = Fikambanan'ny Bulldogge Victoria
Ali the Olde Victorian Bulldogge ao anatin'ny 13 volana
Jereo ny ohatra bebe kokoa momba ny Olde Victorian Bulldog
Sary Olde Victorian Bulldog 1
dachshund dapple mainty sy fotsy
alika kely pitbull 10 herinandro
alika kely bulldog australia amidy
zanak'alika terrier mainty sy fotsy
cavalier king charles spaniel poodle mifangaro